ကြားဘူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၅) - Myanmar Network
ကြားဘူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၅)
Posted by Language Republic on December 19, 2014 at 18:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အပိုင်း (၅) မှာတော့ big wig, kingpin နှင့် top banana တို့၏ အဓိပ္ပါယ်၊ သမိုင်းနှင့် ဥပမာများကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအရေးပါတဲ့ သူဋ္ဌေးသူကြွယ်၊ အရာရှိ၊ ပညာရှိ စသည်တွေကို ခေါ်တဲ့အခါ သုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံး မြောက်များစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အရေးပါတဲ့ သူတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုိုခေါ်တဲ့ စကားလုံး တစ်ခုက Big wig ဖြစ်ပါတယ်။ Wig က ဆံပင်တု ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ဟိုးရှေးရှေး ၁၇ ရာစု အချိန်တုန်းက ဥရောပမှာ အရေးပါတဲ့လူတွေဟာ wig လို့ခေါ်တဲ့ ဆံပင်တုကြီးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတယ်။ နှစ်ကြာလာလေလေ ဆံပင်တုက ပိုကြီးလာလေလေပေါ့။ လူတစ်ယောက်က ခေါင်းမှာဆင်ထားတဲ့ ဆံပင်တုရဲ့ အရွယ်အစားက အဲ့ဒီလူရဲ့ အရေးပါမှုကို ဖေါ်ပြပါတယ်။ ပိုပြီး အရေးပါတယ်လို့ ထင်ရင် ပိုပြီးကြီးတဲ့ ဆံပင်တုကို ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ဆံပင်တုတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ ကြီးသလဲဆိုရင် ဝတ်ထားတဲ့ သူရဲ့ ခေါင်းကို ဖုံးရုံမက ပုခုံးအထိပါ ပိကျနေအောင် ပါဘဲ။ ရုပ်ရှင်တွေ စာအုပ်တွေမှာ မြင်ဖူးကြမှာပါ။
အခုအချိန်မှာတော့ ‘Big wig’ ဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူ အရေးပါတယ်လို့ အထင်ရောက်နေသူတွေ ကို လှောင်ပြောင်ဖို့ သုံးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသူ့ရှေ့မှာ Big wig လို့ ပြောလေ့မရှိဘဲ သူ့နောက်ကွယ်မှာသာ ပြောကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
We were invited toalunch with local bigwigs.
Barry isabig wig in Gulf Oil -avice president or something.
နောက်ထပ် အရေးပါသူကိုခေါ်တဲ့ စကားလုံးက ‘kingpin’ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးက bowling game ကနေလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ kingpin ဆိုတာ နံပါတ် ၁ pin ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ bowling ဘောလုံးနဲ့ kingpin ကို အချက်ကောင်းထိအောင် ပစ်နိုင်ရင် ကျန်ထောင်ထားတဲ့ pin တွေအားလုံးလဲကျကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက bowling ကစားနည်းရဲ့ ပန်းတိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်း၊ ပရောဂျက် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ အရေးပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကို kingpinလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အကယ်လို့သာ kingpin ဆိုတဲ့ သူကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင် အဲ့ဒီလုပ်ငန်း၊ ပရောဂျက်၊ အဖွဲ့အစည်းက ပြိုပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းတွေက အရေးပါဆုံးသောခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း kingpin လို့ခေါ်ပါတယ်။
The police have arrested the suspected kingpin ofacar-stealing operation.
This device is secured inanormal manner byacentral kingpin which is received withinaslot portion of the device.
တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ အမြင့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို top လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ခေါ်တဲ့ စကားလုံးတစ်ချို့မှာ top ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတာ ထူးခြားတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
အဲ့ဒီထဲကစကားလုံးတစ်ခုကတော့ ‘top banana’ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘top banana’ ဆိုတာက ဟာဒယဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဦးဆောင်သူ အနုပညာရှင်ကိုခေါ်တာပါ။ အတော်ဆုံး လူရွှင်တော်ကိုခေါ်တာပေါ့။ ဒုတိယ အတော်ဆုံးကို ‘second banana’ စသည်ဖြင့် အစဉ်လိုက် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် banana ဆိုတာကရောဘာကြောင့်သုံးပါသလဲ။ အရင်တုန်းက ဟာဒယဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ လူပျက်ခေါ် လူရွှင်တော်တွေဟာ စင်ပေါ်မှာဖျော်ဖြေတဲ့အခါ ပျက်လုံးထုတ်ရင်း တစ်ယောက်ခေါင်းကို တစ်ယောက် ငှက်ပျောသီးပုံစံရှိတဲ့ ခပ်ပျော့ပျေုာ့ အရာတွေနဲ့ ရိုက်ကြပါတယ်။ ‘Top banana’ ကို show business ခေါ်တဲ့ အနုပညာလောကမှာ ယနေ့တိုင် အဓိကသုံးစွဲနေတုန်းပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အခြားသော နယ်ပယ်တွေမှာလည်း အရေးပါတဲ့ ထိပ်ဆုံးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း ခေါ်ရင်သုံးလို့ ရပါတယ်နော်။
For many years he was top banana on the circuit.
He's the mob's top banana.
Permalink Reply by naylinn on January 11, 2015 at 9:55
Permalink Reply by Shein Min Htet on January 13, 2015 at 8:21